Hawl-gallo amni oo ka socda Galkacyo; Bandowgii oo ka hirgalay & Gaadiid tira badan oo la qabtay. – Radio Daljir
Hawl-gallo amni oo ka socda Galkacyo; Bandowgii oo ka hirgalay & Gaadiid tira badan oo la qabtay.
Abriil 29, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, April 29 – Ciidamada amniga Puntland ayaa hawl-galladoodii ugu horreeyey xalay ka bilaabay magaalada Galkacyo kaddib markii dhawaan dawladdu ay maamul cusub o magacawday gobolka iyo degmada, shaacisayna wax-ka-qabashada ammaanka gobolka gaar ahaanna midka magaalada Galkacyo, hawl-galkoodaasina ku qab-qabtay gaadiid badan.
In badan 40 gaadiidka ah oo iskuga jira kuwa xarragada iyo kuwa xammuulka ayay ciidamadu hawl-galladoodii xalay ku qabteen kuwaasi oo iskugu jiray kuwo lagu qabtay bacaha muraayadaha lagu dhaajiyo, kuwo aan canshuurnayn waxaana saakaya badankooda saaka la dul-dhigay ganaaxyo lacageed iyadoo beersoolkiina laga fiiqay.
Ciidamada amniga ayaa xalay jid-gooyooyin kala duwan dhigtay inta badan waddooyinka halbawlaha ah ee magaalada Galkacyo iyagoo baaritaanno dheeraad ah ku samaynayey dadka iyo gaadiidkaba, si gaar ahna u bar-tilmaameedsanayey baarbuurta aan lahayn taagooyinka, kuwa aan canshuurnayn iyo kuwa leh bacaha madmadaw ee lagu dhajiyo muraayadaha baabuurta, waxaana xalay xilli horaba yaraaday isku-socodka dadka iyo gaadiidka mandawga aawadiis.
Hawl-galkaan ayaa lagu micneeyey in uu yahay mid lagu damacsan yahay amaba looga golleeyahay xaqiijinta nabad-galyada magaalada Galkacyo in muddo ah daris la noqotay dilal-qorshaysan iyo dabac xagga maamulka ah.
Dhinaca kale ciidamada nabad-galyadu waxay xalay wadeen qorshe lagu taabbo-galinayo bandawgii maamulku uu ku soo rogay magaalada Galkacyo kaasi labo habeen-jirsaday, waxaana ciidamadu dadka iyo gaadiidkaba ku war-galinayaan u hoggaansamidda amarrada bandawga la xiriira si magaalada looga hoydo xilliga loo cayimay.
Magaalada Galkacyo saaka waxaa lagu arkayey baabuur makarfoonno ku xiran yihiin, kuwaasi oo laga naadinayey xilliga mandawga magaalada iyadoo wax laga baddlay xilligii hore lagana dhigay 5:30PM makhribnimo, waxaana dadweynaha la farayey in ay u hoggaansamaan awaamiinta dawladda si ay xarig iyo xabsi uga bad-baadaan.
Hawl-gallaadaan ay wadaan ciidamada amnigu ayaa yimdi xilli muddooyinkii ugu danbeeyey si weyn looga walwalsanaa xaaladda ammaan ee magaalada Galkacyo, kaddib markii ay Galkacyo isku-baddashay meel lagu ugaarsado wax-ku-oolka qaybaha kala duwan ee bulshada.
Garoowe: Tirada caruurta u jiifta isbitaalka cudurada faafa oo sii kordhaysa; ololihii todobaadka tallaalka oo guul ku soo dhamaaday.
Wasaaradda qorsheynta ee Puntland oo bilawday daraasad sahan ah oo lagu baarayo nolosha aasaasiga ah ee bulshada.